Liphoseni KuYehova Lonke Ixhala Lenu—1 Petros 5:7 | Efundwayo
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Intetho Yezandla YaseAngola Intetho Yezandla YaseIndia Intetho Yezandla YaseMerika Intetho Yezandla YaseVenezuela Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseChile Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseCzech Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseFransi Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJamani Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseKorea Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseOstreliya Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yasePoland Intetho Yezandla yasePortugal Intetho Yezandla yaseRashiya Intetho Yezandla yaseSpain Intetho Yezandla yaseTshayina Intetho Yezandla yaseZimbabwe Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAcholi IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBashkir IsiBassa (saseCameroon) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiChuvash IsiCibemba IsiCinyanja IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiJula IsiKabiye IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLamba IsiLatvia IsiLhukonzo IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMaya IsiMbunda IsiMingrelian IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiMyanmar IsiNdebele IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNigerian Pidgin IsiNorway IsiNzema IsiOkpe IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPidgin (SaseCameroon) IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiRunyankore IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUrhobo IsiUruund IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiZapotec (saseIsthmus)
“Liphoseni [kuYehova] lonke ixhala lenu, kuba unikhathalele.”​—1 PET. 5:7.
IINGOMA: 60, 23
ILizwi likaThixo linokulithoba njani ixhala esinalo?
Yintoni esinokuyenza ukuze sibe ‘noxolo lukaThixo’?
Ibandla linokukunceda njani ukuba uthobe ixhala?
1, 2. (a) Kutheni ingafanele isothuse nje into yokuba sifikelwe ngamaxhala ngamany’ amaxesha? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) (b) Siza kuthetha ngantoni kweli nqaku?
UBOMI bunzima kakhulu kule mihla. USathana uMtyholi ulugcwabevu ngumsindo kwaye “uhambahamba njengengonyama egqumayo, efuna ubani engamqwengayo.” (1 Pet. 5:8; ISityhi. 12:17) Ngoko ayothusi into yokuba nathi, bakhonzi bakaThixo, sibe namaxesha okuziva sinexhala. Kaloku nabakhonzi bakaYehova bamandulo, abanjengoKumkani uDavide, babekhe baxhalabe ngamanye amaxesha. (INdu. 13:2) Ukhumbule ukuba nompostile uPawulos ‘wayewaxhalabela onke amabandla.’ (2 Kor. 11:28) Kodwa yintoni esinokuyenza xa sisindwa ngamaxhala?
2 UBawo wethu onothando osezulwini wabanceda abakhonzi bakhe bamandulo, kwaye nanamhlanje ubangela ukuba sikwazi ukufumana isiqabu kwizinto ezisikhathazayo okanye ezisixhalabisayo. IBhayibhile ithi: “Liphoseni kuye lonke ixhala lenu, kuba unikhathalele.” (1 Pet. 5:7) Kodwa unokuyenza njani loo nto? Siza kuthetha ngendlela esinokuliphosa ngayo ixhala lethu kuye​—ngokuthandaza kuye simxelele yonke into, ngokufunda iLizwi lakhe nangokucinga ngezinto esizifunde kulo, ngokuxhamla kumoya oyingcwele wakhe, nangokuphalaza imbilini yethu kumntu esimthembayo. Njengoko sixubusha ezi ndlela zine, khawujonge ukuba zeziphi wena ofuna ukuzisebenzisa.
“UMTHWALO WAKHO WULAHLELE KUYEHOVA”
3. Ukuthandaza kunokukunceda njani ‘uwulahlele kuYehova umthwalo wakho’?
3 Into yokuqala esimele siyenze kukuthandaza kuYehova simchazele yonke into. Xa unengxaki ekwenza ungakhululeki, woyike okanye ube nexhala, yiphalaze kuBawo wethu onothando osezulwini. Umdumisi uDavide wamcenga uYehova esithi: “Owu Thixo wubekele indlebe umthandazo wam.” Kwakule ndumiso inye, waphinda wathi: “Umthwalo wakho wulahlele kuYehova, yaye yena wokuxhasa.” (INdu. 55:1, 22) Emva kokuba wenze konke okusemandleni akho ukuze ulungise loo ngxaki, into eya kukunceda kukuthandaza ukhuphe iimvakalelo zakho kunokuba uzixhalabise ngayo. Kodwa ukuthandaza kunokukunceda njani ukuba zingakongameli iingcinga eziphazamisayo nentlungu?​—INdu. 94:18, 19.
4. Kutheni kubalulekile ukuthandaza xa sinexhala?
4 Funda eyabaseFilipi 4:6, 7. UYehova unokusiphendula xa sisoloko sithandaza kuye size siphalaze iimbilini zethu. Njani? Ngokusenza sizole, iingqondo neentliziyo zethu zingaphazamiseki. Baninzi abantu abazivele ngokwabo le nto. UThixo ubancedile baba seluxolweni kwaye bazola ngendlela engaphaya kokuqonda, kunokuba babe nexhala, okanye bacinge ukuba kukho into embi eza kwenzeka. Nawe unokukunceda. “Uxolo lukaThixo” lunokoyisa nayiphi na ingxaki eza kuwe. Wathembe la mazwi kaYehova athuthuzelayo athi: “Musa ukubhekabheka, kuba ndinguThixo wakho. Ndiza kukuqinisa. Ndiza kukunceda ngokwenene.”​—Isa. 41:10.
ILIZWI LIKATHIXO LISINCEDA SIZOLE
5. ILizwi likaThixo linokusinceda njani ukuba sizole?
5 Into yesibini esimele siyenze ukuze sizole kukufunda iBhayibhile nokucinga ngezinto esizifunde kuyo. Kutheni kubalulekile nje ukwenza loo nto? Kungokuba iBhayibhile inamacebiso asebenzayo naqinisa ubuhlobo noThixo, anokusinceda siliphephe okanye silithobe ixhala, kungenjalo sizilungise izinto ezisixhalabisayo. Ukhumbule ukuba iLizwi likaThixo liyanceda kwaye liyahlaziya kuba linamazwi obulumko avela kuMdali ngokwakhe. Kuya kukuqinisa kakhulu ukusoloko ucinga ngezinto ezithethwa nguThixo, nokucinga ngeyona ndlela yokusebenzisa ukhokelo asinika lona ngeBhayibhile. UYehova wathi umntu ofunda iLizwi lakhe uba ‘nesibindi aze omelele’ kunokuba ‘othuke okanye ankwantye.’​—Yosh. 1:7-9.
6. Anokukunceda njani amazwi awathethwa nguYesu?
6 ILizwi likaThixo linamazwi athuthuzelayo awathethwa nguYesu. Amazwi neemfundiso zakhe zazibahlaziya abantu ababemmamele. Baninzi abantu ababethontelana besiza kuye kuba wayebenza bazole abantliziyo zinexhala, aqinise ababuthathaka, aze athuthuzele abaxhwalekileyo. (Funda uMateyu 11:28-30.) Ekubeni wayebathanda, wayeqinisa ubuhlobo babo noThixo, ebacingela indlela abaziva ngayo, kwaye ebalungiselela nezinto abazidingayo. (Marko 6:30-32) Nanamhlanje uYesu usathembisa ukusixhasa. Nawe unokukuxhasa kanye ngendlela awabaxhasa ngayo abapostile ababehamba naye. Akuyomfuneko ukuba ude ube secaleni kukaYesu ukuze akuxhase. Ekubeni enguKumkani ezulwini, usaqhubeka enovelwano. Ngoko, xa kukho into ekuxhalabisayo, unokukwenzela inceba aze ‘akuncede ngexesha elifanelekileyo.’ UYesu unako ukukunceda ujongane nobunzima kwaye ube nethemba nesibindi.​—Heb. 2:17, 18; 4:16.
IIMPAWU EZINTLE EZIVELISWA NGUMOYA KATHIXO
7. Uza kuncedakala njani xa uThixo ekunika umoya oyingcwele owucelileyo?
7 UYesu wathembisa ukuba uBawo wethu osezulwini akanakuze abavimbe umoya oyingcwele abo bawucelayo kuye. (Luka 11:10-13) Isiqhamo salo moya siyinto yesithathu enamandla eza kukunceda uthobe ixhala. Ezi mpawu zintle ziveliswa ngamandla kaThixo asebenzayo zityhila obona buntu bukaThixo ongusomandla. (Funda eyabaseGalati 5:22, 23; Kol. 3:10) Xa usebenzela ukuba nezi mpawu, uya kutsho ukwazi ukuphila nabanye abantu. Uya kufumanisa ukuba aziveli kwaukuvela iingxaki ezininzi ebezinokukwenza ube nexhala. Makhe sithi gqaba-gqaba nje ngendlela isiqhamo somoya esiya kukunceda ngayo.
8-12. Isiqhamo somoya oyingcwele kaThixo sinokukunceda njani uzilungise okanye uziphephe izinto ezixhalabisayo?
8 “Uthando, uvuyo, uxolo.” Xa ubaphatha ngembeko abantu, kudla ngokuba lula ukulawula iimvakalelo ezikwenza ube phantsi. Yenzeka njani loo nto? Kaloku ukuba uyabathanda abazalwana, unomsa kwaye unembeko, uza kuzibaleka izinto ezinokukwenza uxhalabe.​—Roma 12:10.
9 “Ukuzeka kade umsindo, ububele, ukulunga.” Uhlala ngoxolo nabanye abantu xa uthobela la mazwi athi: “Yibani nobubele omnye komnye, nibe nemfesane, nixolelane ngesisa.” (Efe. 4:32) Xa usenjenjalo, uzithintela zingekaveli iingxaki ebezinokukwenza uxhalabe. Kwaye uya kukwazi ukuba mawuthini na xa kuvela iingxaki ezibangelwa kukungafezeki.
10 “Ukholo.” Kule mihla, sidla ngokuxhalatyiswa kukungabi namali nazizinto esizidingayo. (IMize. 18:11) Kodwa ukuba nokholo lokuba uYehova uza kukunyamekela kunokukunceda uzinyamezele ezi zinto okanye zingakuxhalabisi. Njani? Izinto ezininzi ezixhalabisayo unokuzibaleka ukuba ulandela icebiso eliphefumlelweyo likampostile uPawulos elithi: “Yanelani zizinto ezikhoyo.” UPawulos wongeza athi: “Kuba [uThixo] uthe: ‘Andiyi kuze ndikushiye, ndingayi kuze ndikutyeshele.’ Ngoko ke masomelele kakhulu size sithi: ‘UYehova ungumncedi wam; andiyi koyika. Angandenza ntoni na umntu?’”​—Heb. 13:5, 6.
11 “Ubulali, ukuzeyisa.” Khawucinge nje indlela ekunokukunceda ngayo ukuba nezi mpawu. Zisenokukunceda ungazenzi izinto eziya kukwenza ube nexhala, kwaye awuyi kuba nabo “ubukrakra bolunya [okanye inzondo] nomsindo nengqumbo nokumemeza nokutshabhisa.”​—Efe. 4:31.
12 Kuza kufuneka uthobeke ukuze uvumele ‘isandla esinamandla sikaThixo’ sikulawule, uze ‘uliphose kuye lonke ixhala lakho.’ (1 Pet. 5:6, 7) Kwaye njengoko usebenzela ekuthobekeni, uThixo uza kukuthanda aze akuxhase. (Mika 6:8) Xa uyamkela into yokuba umzimba, ingqondo neemvakalelo zakho zilinganiselwe, awunakufane usindwe lixhala, kuba uza kube uqamele ngoThixo.
13. Wayethetha ukuthini uYesu xa wayesithi: ‘Musani ukuxhala’?
13 KuMateyu 6:34 (mfunde), sifumana icebiso likaYesu elithi: ‘Musani ukuxhala.’ Kodwa ke, kusenokuba nzima ukulisebenzisa eli cebiso. Wayethetha ukuthini uYesu xa wayesithi: ‘Musani ukuxhala’? Kucacile ukuba wayengathethi kuthi umkhonzi kaThixo akanakuze abe nalo ixhala ebomini bakhe; sele siwevile amazwi awathethwa nguDavide noPawulos ngalo mba. UYesu wayenceda abafundi bakhe babone ukuba ukuxhalaba kakhulu okanye ngokugqithiseleyo akuncedi nganto. Usuku ngalunye luneengxaki zalo, ngoko amaKristu awamele azithwalise ubunzima ngokuxhalatyiswa zizinto ezadlulayo okanye zizinto zexesha elizayo, kunoko amele ajonge ezikhoyo ngoku. Ukusebenzisa eli cebiso likaYesu kunokukunceda njani ukuze ungaqotywa lixhala?
14. Yintoni onokuyenza ukuze ungaxhalatyiswa zizinto zexesha elidlulileyo?
14 Iimpazamo esizenze kwixesha elidlulileyo kunye nezinto esoyiswe kukuzenza nazo zinokusixhalabisa. Sisenokuba nomvandedwa wento esayenzayo, mhlawumbi kwiminyaka emininzi eyadlulayo. UKumkani uDavide wathi ngamany’ amaxesha wayevakalelwa kukuba ‘iziphoso zakhe zaziphezu kwentloko yakhe.’ Wathi: “Ndiyagcuma ngenxa yokugcuma kwentliziyo yam.” (INdu. 38:3, 4, 8, 18) Yinto awayeza kuyithini ke leyo uDavide? Wenza ntoni? Wamthemba uYehova ukuba wayeza kumenzela inceba aze amxolele. Eqinisekile, wathi: “Unoyolo lowo imvukelo yakhe ixolelweyo.”​—Funda iNdumiso 32:1-3, 5.
15. (a) Kutheni ungamele uxhalatyiswe zizinto ezenzeka ngoku? (b) Zeziphi izinto onokuzenza ukuze uthobe ixhala? (Jonga ibhokisi ethi “ Izinto Onokuzenza Ukuze Uthobe Ixhala.”)
15 Ngamanye amaxesha usenokuxhalatyiswa zizinto ezenzeka ngoku. Ngokomzekelo, xa uDavide wayebhala iNdumiso 55, wayesoyikela ubomi bakhe. (INdu. 55:2-5) Kodwa ke, akazange avumele ixhala ukuba limenze angamthembi uYehova. UDavide akazange anele nje ukuzithandazela iingxaki zakhe, kodwa wayeqonda ukuba kubalulekile ukwenza iinzame zokulungisa izinto ezazimxhalabisa. (2 Sam. 15:30-34) Nawe funda kule nto yenziwa nguDavide. Kunokuba usindwe lixhala, yenza loo nto unokukwazi ukuyenza ukuze ulungise imeko, emva koko uyiyekele kuYehova ungenaxhala.
Izinto Onokuzenza Ukuze Uthobe Ixhala
Zazi izinto ezibalulekileyo.
Ungalindeli izinto ezingenakwenzeka.
Ziphe ixesha lokuba wedwa suku ngalunye.
Buka indalo kaYehova.
INDUMISO 104:24, 25
Ungayeki ukuba noburharha.
16. Ukholo lwakho lunokuqina njani xa usazi oko kuthethwa ligama likaThixo?
16 Xa umKristu ezikhathaza ngeengxaki ezisenokuvela kwixesha elizayo uzibizela nje ixhala lizihlalele. Akufanelanga uzixhalabise okanye uzikhathaze ngezinto ongazi kwanto ngazo. Ngoba? Kuba izinto zidla ngokungabi mbi ngendlela ebesicinga ngayo. Ukongezelela koko, ayikho into enokuze imoyise lo Thixo sinokuliphosa kuye lonke ixhala lethu. Kucingelwa ukuba igama lakhe lithetha “Lowo Ubangela Kubekho.” (Eks. 3:14) Eli gama lakhe lisenza singayithandabuzi into yokuba uThixo angayenza iphumelele injongo anayo ngabakhonzi bakhe. Ungayithandabuzi into yokuba uThixo unako ukubavuza abo bathembekileyo kuye aze abancede kwizinto ezibaxhalabisayo ezenzeke kwixesha elidlulileyo, ezenzeka ngoku, neziseza kwenzeka.
UKUPHALAZA IMBILI YAKHO
17, 18. Ukuthetha phandle kunokukunceda njani ukuba uthobe ixhala?
17 Into yesine eza kukunceda uthobe ixhala kukuthetha, uphalaze imbilini yakho kumntu omthembileyo. Umyeni okanye inkosikazi yakho, umhlobo, okanye umdala unokukunceda uyijonge ngendlela eyiyo loo nto ikuxhalabisayo. “[Inkxalabo] esentliziyweni yendoda iya kuyibangela ukuba iqubude, kodwa ilizwi elilungileyo liyenza ibe nemihlali.” (IMize. 12:25) Ukuthetha phandle uchaze kanye le nto uyivayo kunokukunceda uqonde kwaye wazi into omele uyenze ngezinto ezikuxhalabisayo. IBhayibhile ithi: “Amacebo ayatshitsha apho kungekho gqugula, kodwa ngobuninzi babacebisi kukho okufezwayo.”​—IMize. 15:22.
18 Enye indlela uYehova anceda ngayo amaKristu angaxhalabi ziintlanganiso zebandla ezibakho veki nganye. Ezintlanganisweni udibana namanye amakholwa akukhathaleleyo nafuna ukukhuthazana. (Heb. 10:24, 25) Olo ‘khuthazo’ lunokukunceda ubuqinise ubuhlobo bakho noThixo kuze kube lula kuwe ukulungisa nayiphi na into ekuxhalabisayo.​—Roma 1:12.
EYONA NTO IKOMELEZAYO BUBUHLOBO BAKHO NOTHIXO
19. Yintoni ekwenza uqiniseke ukuba ubuhlobo bakho noThixo buya kukomeleza?
19 Omnye umdala waseKhanada wafunda ukuphosa ixhala lakhe kuYehova. Umsebenzi awenzayo wokufundisa abantwana esikolweni unzima, kuphinde ke kubekho nesigulo esimenza afikelwe lixhala noloyiko. Uncedwe yintoni lo mzalwana? Xa ecacisa uthi: “Into engamandla endiyifumanisileyo kukuba ukusebenza nzima ukuze ndiqinise ubuhlobo bam noYehova yeyona nto indomelezayo xa kukho izinto ezindikhathazayo. Ukuxhaswa ngabahlobo nangabazalwana kubaluleke kakhulu xa ujongene nobunzima. Andimfihleli nto umkam kwaye ndimchazela kanye le nto ndiyivayo. Abadala endikunye nabo ebandleni kunye nomveleli wesiphaluka bandincede kakhulu ukuba ndizibone ngendlela efanelekileyo izinto. Enye into endincedileyo kukuya koogqirha, ukutshintsha indlela endilisebenzisa ngayo ixesha lam, nokuzibekela ixesha lokuphumla nelokuzilolonga. Ndiye ndakwazi ukuzilawula izinto kancinci kancinci. Xa kukho into endingakwaziyo ukuyilawula, ndiyiyekela ezandleni zikaYehova.”
20. (a) Sinokuliphosa njani ixhala lethu kuThixo? (b) Siza kuthetha ngantoni kwinqaku elilandelayo?
20 Lilonke, sifunde ukuba kubalulekile ukuphosa ixhala lethu kuThixo ngokuthandaza kuye simxelele yonke into, ngokufunda iLizwi lakhe nangokucinga ngezinto esizifundileyo. Sibonile nokuba kubalulekile ukuzama ukuba nesiqhamo somoya wakhe, ukuphalaza imbilini kumntu esimthembayo, nokukhuthazwa ngamanye amaKristu ebandleni. Inqaku elilandelayo liza kusityebisela ngendlela uYehova aqhubeka esinceda ngayo ngokusithembisa ngomvuzo.​—Heb. 11:6.